खाडीमै बिते भक्तबहादुर र लीलमतीका तीन छोरा, रित्तियो काख ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०२:२५ |
बेनी । मालिका-२ रुमका ६९ वर्षीय धनबहादुर रोका दस वर्षदेखि नसा रोगले ग्रसित छन्। दिनहुँ औषधि सेवन नगर्ने हो भने उनको हातखुट्टा चल्दैन। भित्र-बाहिर गर्न पनि सहयोगी चाहिन्छ।रोकाकी श्रीमती ६४ वर्षीया लीलमतीलाई पे्रसरको समस्या छ। पछिल्लो समय ग्यास्ट्रिक बढेपछि उनले पे्रसर र ग्यास्ट्रिक दुवैको औषधि खाइरहेकी छन्। रोगले थलिएको यो दम्पतीले पछिल्ला १२ वर्षमा जे भोगेको छ, त्यो अझ कहालीलाग्दो छ। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चार छोरामध्ये तीन भाइको वैदेशिक रोजगारी क्रममा खाडी मुलुकमै मृत्यु भइसकेको छ। चैत १० गते मलेसियमा सुरक्षागार्डमा कार्यरत कान्छा छोरा धर्मलाल कोठामै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। ठिक १२ वर्षअघि माइला छोरा भक्तबहादुरको कतारमा मृत्यु भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि जेठा छोरा समबहादुरको पनि मलेसियामै मृत्यु भयो। तीनै जनामा कुनै किसिमको रोग थिएन।
बिहीबार रातो काठको बाकसमा कान्छा छोराको शव हेरेपछि धनबहादुर भक्कानिए। धर्मलालको शव घर पुर्‍याएर बिहीबार नै अन्येष्टि गरिएको छ। लीलमती अर्धमूर्छित छिन्। रोका दम्पतीका अब साइँला छोरा थमबहादुर मात्रै छन्। दुई छोरीको विवाह भइसकेको छ। थमबहादुर र धर्मलाल सात महिनाको अन्तरालमा मलेसिया पुगेका थिए।
थमबहादुर चैत ८ गते मात्रै घर आइपुगेका हुन्। उनी घर आइपुगेको दुई दिनमै भाइको यस्तो घटना भएको हो। ‘माइला दाजु कतार जानुभएको २१ महिनामा बित्नुभएको हो। भर्खर विवाह गरेर जानुभएको उहाँले गर्भको छोराको मुख पनि हेर्न पाउनुभएन। त्यसपछि घरको दुःखले जेठा दाजु मलेसिया जानुभयो, उहाँको पनि १० महिनामा उतै मृत्यु भयो’, थमबहादुरले भने, ‘केही वर्ष त हामी दुवैले यहाँ नै केही गर्‍यौँ तर केही नलागेपछि मलेसिया जाने निर्णय गर्‍यौं।’
कम्पनी फरक भए पनि थमबहादुर र धर्मलालको महिना दिनमा भेट भइरहन्थ्यो। ‘भाइले तपाईं पहिला जानु, म दसैँमा आउँछु भन्यो। दसैँमा आएर विवाह गर्ने हो दाइ भन्थ्यो’, थमबहादुर थपे, ‘खै घरमा के भएको कुन्नि, यस्तो विपत आइलाग्यो।’
धनबहादुर र लीलमतीले महिनामा पाँच हजार रुपैयाँको त औषधि मात्रै खानुपर्छ। त्यसमाथि जेठा र माइलाको छोराछोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। जेठातर्फ दुई र माइलाको एक छोरा छ। उनीहरूको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको थमबहादुरको भनाइ छ। ‘पहिला त भाइ पनि थियो, हामी दुईजना मिलेर घर खर्च चलाएका थियौं। अब मलाई कसरी चलाउने भन्ने पीर छ। म पनि किन बाँच्ने भन्ने लाग्छ’, थमबहादुरले आफ्नो पीडा पोखे। कान्छी छोरी शशिकला रोकाले धर्मलालले हरेक महिना आमाबुवालाई औषधि किन्ने खर्च पठाउने गरेको बताइन्।
‘दसैँमा आउँदा दुई दिदीलाई सुनको सिक्री ल्याइदिन्छु भन्दै फोन गर्थे, अहिले नबोल्ने भएर आएछ’, उनी भक्कानिँदै थिइन्, ‘अब बुबा-आमालाई कसले औषधि दिन्छ ? ’ तीन छोरा गुमाएपछि रोका परिवार आर्थिक समस्यामा परेको छ। मालिका गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद रोकाले गाउँपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। ‘किरिया खर्चदेखि छोराछोरीको पढाइमा सहयोग गर्नेछौं’, उनले भने। रोका परिवारलाई बिहीबार विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिहरूले ३० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च हस्तान्तरण गरेका छन्।
Previousनिगमले चिनीयाँ जहाज उडाउन अंग्रेजी जानेका चिनियाँ क्याप्टेन ल्याउँदै
Nextकिन थपियाे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी
३० श्रावण २०७५, बुधबार ०३:३०
सरकाररले धोका दिएको संघीय गठबन्धनको ठहर
१४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०२:०८
काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम (अपडेट)
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार १७:३४